VPN gaggaarii sadan moobayila Android - Barataa Technologies - Giddu Gala barnootaa fi Odeeffannoo
Gargaarsa VPN(virtual Private Network)’n nageenya keenya kan gama intarneetii eegganna. Akkuma qunnamtiin gama interneetaa babal’ataa dhufeen, yakkoonni gara garaas wajjumaa babal’ataa dhufee jira. Kana ofirraa ittisuuf yookiin baraaruuf VPN gargaaramuun barbaachisaadha.
Maxxansa kana keessatti, VPN gaggaarii moobaayiloota Android irratti hojjatan isin beeksisa. Haga xumuratti dubbisaa. Hiriyoota keessaniifis qoodaa.
Alifu Haji· July 16, 2019
Alifu Haji· July 15, 2019
#1 Secure VPN fi Thunder VPN
kaampaaniin Signal Lap jedhamu appota kanneen hojjate. Apponni kunniin guutumatti tola. Itti fayyadamuuf kafaltii homaatuu hin gaafatan. Beeksisoota muraasa ofirraa kan qabu. Kanaan alatti guutumatti tola.
#2 Hola VPN
Hola VPN’nis VPN tolaa koompiitaraa fi moobayila irratti hojjatuudha. VPN kuns akkuma kan jalqabaa kafaltii homaatuu kan hin qabne yoo tahu, koompiitara irratti Google Chrome keessatti akka Extensionitti argama. VPN kanatti fayyadamuuf galmeen homaatuu kan hin barbaachisu. Akkasumas gosa beeksisaa kamiinuu ofirraa hin qabu.
Orbt’n VPN madda banaa taheedha. Kafaltii fi beeksisa homaatuu ofirraa hin qabu. Akkasumas itti fayyadamuuf kafaltiin homaatuu kan hin barbaachifne yoo tahu, guutumatti tola jechuudha. Orbot yeroo fayyadamnu, marsariitileen akka google waan recaptcha jedhamu nutti fidudhaan nu rakkisuu danda’u. Isa bira darbuu yoo barbaanne gara Marsariitii duckduckgo deemuun fayyadamuu qabna.
Walumaagalatti VPN armaan olii kanneen gargaaramuudhaan marsariitilee ugguramanii jiran kamuu salphumatti, ugguraa bira darbuudhaan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha.